Maalinta: 20-ka July, 2018
Kulanka Qiimeynta Shilalka Musiibooyinka ee Afmad
Musiibada iyo Agaasinka Degdegga ah ka dib shilkii tareenka ee ka dhacay Tekirdag, diridda iyo isku-duwidda, inta u dhexeysa cutubyada ogeysiiska, isu imaatinka macluumaadka iyo qulqulka macluumaadka, sida kulanka qiimaynta ee la qabtay. 08 Luulyo 2018 [More ...]
Kooxda Isboortiga ee Maalgashiga Isboortiga ee ITU ee BTSO
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Bursa ayaa martigelisay Istanbul Technical University Solar Car Team (ITU GAE). BCCI, oo ay ka sameeyeen jiil cusub oo gaari tamarta qoraxda ku shaqeeya "qaanso İSTKA" iyada oo ujeedadu tahay in la horumariyo iyo in aad tijaabiso safar Turkey [More ...]
Localization Nidaamka Isgaarsiinta Maxaliga ah wuxuu ka bilaabmaa M1 Line of Istanbul Metro
Xuduudaha X ee Qalabaynta Gudaha iyo Qaran ee Isticmaalka X, M1A Newkapı-Atatürk Airport, M1B Yenikapı-Kirazlı iyo M1B's 2. marxaladda Halkalı Nidaamka calaamadaha kontoroolka tareenka ee otomatiga ah oo buuxda iyada oo aan darawal la kordhin [More ...]
Imtixaanno gaar ah oo ka socda SAMULAŞ
Dawlada Hoose ee Magaalada Samsun SAMULAŞ A.Ş. 21-22 adeegyo dheeraad ah oo loogu talagalay murashaxiinta qaadan doona Imtixaanka Beddelka Tooska ah iyo Imtixaanka Xulashada Shaqsiyaadka Dadweynaha ee Bisha Luulyo [More ...]
90 Dhererka Meter ee Jidadka TEM Connection Road
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay fududeeysaa nolosha iyo gaadiidka ee muwaadiniinta ku nool degmooyinka. Degmada Çayırova Neighborhood iyo Tuzla Şifa Neighborhood waxay kuxiran doonaan isku xirka buundada wadada isku xidhka TEM. 12 milyan 712 [More ...]
Shaqooyinka Korantada Dudullu-Bostancı Metro Orge Energy
ORGE Enerji AŞ waxay qabatay shaqooyinka korantada ee dhismaha metro Dudullu-Bostancı ee Istanbul. Shirkadda waxay samayn doontaa shaqooyinka korantada ee khadka Dudullu-Bostancı ee Istanbul Metro. Dhismaha maamulka iyo bakhaarka [More ...]
Kooxaha Agaasinka Caafimaadka ee Cusbitaalada Cusmaanzi, Bursaray ayaa badbaadiyay canugga ku xayiran khadka. Cunugga, oo u dhimanaya gaajo iyo harraad, ayaa aada Xarunta Cusbitaalka Xayawaanka Duurjoogta iyo Cusbitaalka Cusmaanzi. [More ...]
'Vatman' Madame Tussauds ee Istanbul
Sawirka Vaticanman, oo loo diyaariyay inuu soo jiito taraamka nostalgic, oo ah astaanta Beyoğlu, ayaa kaqeybgalay munaasabaddan lagu soo bandhigayay. taariikhdeeda, jidadkeeda, wadooyinkeeda, shaqooyinka dhismaha iyo ugu muhiimsan dadkeeda. [More ...]
Isticmaalka Tareenka Xawaaraha Soomaliya ee Kacsan Heerka 70 OK
Mashaariicda la hirgaliyay, maalgashiga socda iyo kuwa ku jira nidaamka qandaraaska. Kulankii Guddiga Isuduwidda Gobollada ee 2018 Luulyo waxaa lagu qabtay shirguddoomiye gudoomiye Yakup Canbolat. Maalgashiga magaalada ayaa laga wada hadlay kulanka. Sanadka 2018 [More ...]
Muuqaalka Murugada ee Mashruuca Kanal
Qaab-dhismeedka-wareejinta-garoonka diyaaradaha ee cusub ee Istanbul, Eurasia Tunnel iyo Osmangazi, Yavuz iyo buundooyinka Çanakkale ayaa sidoo kale laga fulin doonaa Kanal Istanbul. Si taas loo gaaro, wax ka baddelka lagu sameyn lahaa shalay ayaa loo gudbiyay sharciga 'boorsada sharciga' ee baarlamaanka oo lagu daray sharciga. Turkiga [More ...]
Xeerka Socodka Gaadiidka ee Salim Dervishoge Street
Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sameyneysaa isbadal ku yimaada balaarinta wadada iyo jihooyinka qulqulka taraafikada si loo yareeyo oo ay sifiican ugu fahmaan taraafikada magaalada. Macnaha guud, wuxuu ku yaal Salih Dervişoğlu Street, wadada Ömer Türkçakal Boulevard. [More ...]
Shirkadda soo saarta 7 tram adduunka ee Bursa Durmazlaru dhoofin doonta marki ugu horreysay xubinta EU ee Poland. Marxaladda koowaad, 12 'Panorama' tram wuxuu ku adeegi doonaa waddooyinka Olsztyn. Bursalı DurmazlarTurkey ee taraamka wadaniga ugu horeeyay ee Poland [More ...]
RayHaber 20.07.2018 Warbixinta Shirka
Xagee laga iibsadaa B70 Dhabarka Tijaabada ah
Madaxweyne kuxigeenka CHP Group Ozgur Ozel, Engin Altay iyo Engin Ozkoc, citizenorlu 24 muwaadin ayaa ku dhintey shilka tareenka si loo baaro dayaca iyo in la go'aamiyo dadka mas'uulka ka ah waxay u soo gudbiyeen baarlamaanka baarlamanka soo jeedin baaritaan. [More ...]